Imbali nokugqwesa ngetyala esijikelezayo ukuya iimviwo mortgage kuya kuchaphazela?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Imbali nokugqwesa ngetyala esijikelezayo ukuya iimviwo mortgage kuya kuchaphazela?
History kwaye intsalela credit olujikelezayo iye ukuba ulutyise ngazo zombini "nempembelelo elungileyo, impembelelo embi 'kwiimviwo yemali. Umzekelo, nangona usebenzisa ikhredithi olujikelezayo, ukuba uhlawule isixa imiselwa nyanga nganye ngokufanelekileyo, iya kumiselwa ukuba "kukho irekhodi intlawulo track."
[pc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ PC] [nopc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ Nopc] [su_spacer ubungakanani = "50"] _ x000D_
, kunjalo, kwaye nangoku usemva ngentlawulo kwaye usemva kwabhalwa, yomgangatho ngamnye ngetyala ziya kwehliswe kakhulu. Ngaphezu koko, urhulumente kusekho okuninzi ukulingana, bekuya kuba ithuba omkhulu ukuba bagwetywe ukuba "ikhono intlawulo ulihlwempu." Ngoko ke, abo bafuna ukusebenzisa mortgage, kubalulekile ukuba ukunciphisa imali kangangoko kunokwenzeka kwi sicelo kweqonga.
ngokukodwa akusoloko ukucinga ngale ndlela kwi
omnye onke amaziko ezemali naluphi na uviwo luqhutywa, kodwa iya kuba kuphela yesalathiso, ikakhulu "umlinganiselo inkonzo, kuphantse mboleko-to-ixabiso kwi iimviwo mortgage "kufuneka ubone ukukwazi kwakho ukuyibuyisa. Okuhlawula ratio of "intlawulo yonyaka ÷ yengeniso yonyaka (kubandakanywa irhafu)", mboleko-to-ixabiso ngokulinganayo ubalwa formula 'amaxabiso mboleko mali ÷ yezindlu (kubandakanywa phantsi payment) ", intlawulo Umlinganiselo njengoko njengomnye olusisikhokelo" ngaphantsi kwe 0.25 ", imali-mboleko kwixabiso ratio kuye esitratweni lula iimviwo ukuba "ngaphantsi kwe 0.8".
olujikelezayo imbali yekhredithi kwaye kulinganisela ukuphembelela, kuya kuba i "intlawulo kunyaka" kwezi fomyula. ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ngenxa yokuba, nokuba intsalela ngetyala esijikelezayo i $ 0.00, kukuba omnye kwisithathu komda yeentengo zemboleko idityaniswe kwimali intlawulo yonyaka. Abantu ukuba kukho imbali nokugqwesa ngetyala esijikelezayo ibala umlinganiselo intlawulo evela indlela ngasentla, 0. Masenze qiniseka ukuba ayidluli 25. ukuba umlinganiselo
njani? Ngokumalunga ikhadi yentlawulo
igqityiwe kakade, makhe siqwalasele ukuba yokurhoxiswa phambi koviwo yemali. Ngokunciphisa ikhadi kule mvumelwano, ungenza ukunciphisa intlawulo yonyaka mali.
Noko ke, ikhadi apho kukho imali eseleyo kwi kweli nqanaba, uya kukwazi ukuba ahlale nokuba isicelo. Ukuba kukho ikhadi "kungaba yinto encinane xa ndizuze kancinci", beka ixesha de intlawulo lugqityiwe, nasemva kokuba ukurhoxisa emva pay off ukuba isicelo-mboleko, iza kuthathwa njengenye indlela.
eseleyo ekupheleni ukuba
olujikelezayo ngetyala kubalulekile ukuba wehlise ngenxa yokuba, kangangoko kunokwenzeka oko uzimisele ukuba "ityala". Hayi kuphela izindlu, kwimeko mboleko ukuba abuyise ixesha elide, ezifana ngemoto, ndiza enokuchaphazela uyityalayo ayisiso uviwo kancinane. Okokuqala, ukubala ngokulinganayo kwemali ratio, mboleko-to-ixabiso, logama nje ngaphezu ngomlinganiselo eyaqaliswa ngo kungentla, makhe sicinge nzulu oluthile amanyathelo.
[pc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ PC] [nopc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ Nopc] [su_spacer ubungakanani = "100"] _ x000D_
[pc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ PC] [nopc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ Nopc] [ubukhulu su_spacer = "100"] ]
[pc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ PC] [nopc]-10 okanye ngaphezulu iintlobo iimviwo mortgage kuya kufumaneka ngobuninzi. Kukho kuyingcamango kwangethuba ukuze bacele ukuba ngokutsha phambi ukubandezeleka. [/ Nopc] [ubukhulu su_spacer = "100"]